कायमै छ स्क्रब टाइफसको जोखिम, रोकथामका गर्न के गर्ने ? | Dinesh Khabar
कायमै छ स्क्रब टाइफसको जोखिम, रोकथामका गर्न के गर्ने ?
२०७६ कार्तिक २३, १२:००
चिसो शुरू हुनै लाग्दा पनि देशका विभिन्न भागमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण अझै रोकिएको छैन । सहरको दाँजोमा ग्रामीण क्षेत्रमा यो संक्रमणको चुनौतीमा बढी कायम छ ।
शंकास्पद उच्च ज्वरोको बिरामीलाई चिकित्सकले स्क्रब टाइफसको परीक्षणसमेत गराउने गरेका छन् ।
स्क्रब टाइफसको लक्षण डेंगु, ब्रुसिलोसिस, औलोलगायत थुप्रै संक्रामक रोगसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । यो संक्रमण वर्षभरि नै हुने गरे पनि वर्षा यामपछि र धान काट्ने समय मुसाको चहलपहल बढेपछि बढी देखिने गर्छ ।
के–के समस्या आउँछन ?
यो जीवाणु हाम्रो शरीरमा फैलिएपछि फोक्सो, कलेजो, मस्तिष्कमा थुप्रै प्रकारको संक्रमण हुन थाल्छ । यसले गर्दा संक्रमित व्यक्ति ‘मल्टिअर्गन डिजअर्डर’ (धेरै अंगहरूको समस्या) को अवस्थामा पुग्छ ।
समयमै उपचार नभए रोग गम्भीर भएर निमोनियाको रूपसमेत लिन सक्छ ।
विभिन्न तथ्यअनुसार निमोनियाको जटिलता ३० देखि ६५ प्रतिशत देखिएको छ । केही बिरामीको मृगौला र कलेजो राम्ररी काम गर्दैन । यसले गर्दा बिरामी व्यक्ति बेहोसी अवस्थामा जान्छन् ।
बेलायतस्थित नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) का अनुसार स्क्रब टाइफसको उपयुक्त उपचार नगर्दा जटिलता देखिन सक्ने जोखिमसमेत रहन्छ । यसअन्तर्गत दीर्घकालीन रूपमै सुन्ने क्षमता गुम्नु, निम्न रक्तचापका साथै अंगमा क्षति र मृगौला फेल हुनु, निमोनियाजस्ता अर्को ब्याक्टेरियाबाट हुने संक्रमण देखिनु, छारे रोगको लक्षण, अन्योल, सुस्ती, मासु कुहिनु आदि समस्या देखिन सक्ने एनएचएसले जनाएको छ ।
संक्रमित कीराले टोकेको सामान्यतस् ५ देखि १४ दिनमा रोगको लक्षण देखिने गर्छ । तर यो रोग कीराले टोकेको २० दिनभित्रसमेत देखिन सक्छ ।
रोग लागेको कसरी पत्ता लगाउने ?
यो रोगको पहिचान बिरामीमा देखिएको लक्षण र सूक्ष्म कीराले टोकेको चिनो देखेर पनि गरिन्छ । यसमा रगत परीक्षणसमेत गरिन्छ ।
यसअन्तर्गत लिभर फंग्सन टेस्ट र सीबीसी काउन्ट गरिन्छ । स्क्रब टाइफसको एन्टिबडी पत्ता लगाउन एलाइजा टेस्ट र द्रूत परीक्षणसमेत गरिन्छ ।
यसरी फैलिन्छ स्क्रब टाइफस ?
मुसामा लाग्ने किर्नाजस्तो देखिने माइट (कीरा) ले टोक्दा त्यसका रर््यालमा भएको खतरनाक ब्याक्टेरिया ‘ओरेन्सिया सुसुगामुसी’ मनुष्यको रगतमा फैलिन्छ । यसको कारणले कलेजो, मस्तिष्क, फोक्सोमा थुप्रै प्रकारको संक्रमण हुन लाग्छ । बिरामी धेरै अंगले काम गर्न छोडने अवस्था (मल्टिपल अर्गेन डिजअर्डर) को अवस्थामा पुग्छ ।
२०७७ जेठ २२, ०६:०९
विश्वभर कोरोनाबाट ६५ लाख ६२ हजार बढी संक्रमित
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या तीन लाख ८६ हजार नाघेको छ। जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीको तथ्यांक अनुसार अहिले सम्म मृत्यु हुनेको संख्या तीन लाख ८६ हजार ७ सय ८४ पुगेको छ। … विस्तृतमा
२०७७ जेठ २१, ०१:२१
’अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा’
स्वास्थ्य तथा जनसङख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेकाले अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने बताएका छन्। … विस्तृतमा
२०७७ जेठ २१, ०७:५७
विश्वभर कोरोना संक्रमित ६४ लाख ७३ हजार नाघे
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या तीन लाख ८१ हजार नाघेको छ। जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीको तथ्यांक अनुसार अहिले सम्म मृत्यु हुनेको संख्या तीन लाख ८१ हजार ७ सय ९ पुगेको छ। … विस्तृतमा
इजरायलमा ७ हजार विद्यार्थी र शिक्षक क्वरेण्टीनमा, ४० बढी स्कुल बन्द